အရွယ်ရောက်ချိန် - Thiloyarmay ׀ ဖိုမ ဆက်ဆံရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မေးလိုရာ
Thiloyarmay ׀ ဖိုမ ဆက်ဆံရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မေးလိုရာ > ကျွန်မတို့ကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် > အရွယ်ရောက်ချိန်
အရွယ်ရောက်ချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုနဲ့စိတ်ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုနှစ်ခုစလုံးပါဝင်ပြီးဘဝမှာဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေကြုံလာတဲ့အခါမိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ၊ကမောက်ကမဖြစ်တာတွေ၊စိတ်ရှုပ်ထွေးတာတွေနဲ့မဝံ့မရဲရှိးတိုးရှန်းတန်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သတိထားရမှာကအရွယ်ရောက်ချိန်အတောအတွင်းခန္ဓာကိုယ်မှာဟော်မုန်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအများကြီးဖြစ်ပေါ်နေပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပုံမှန်အတိုင်းရှိနေတယ်လို့အပြည့်အဝခံစားမိဖို့ကမသေချာပါဘူး။မိန်းကလေးအများစုကယောက်ျားလေးတွေထက်အရွယ်ရောက်တာပိုစောပြီးအရွယ်ရောက်ချိန်ပြီးဆုံးတာလည်းပိုပြီးစောပါတယ်။အများအားဖြင့်ပထမဆုံးသတိထားမိတဲ့ပြောင်းလဲမှုကရင်သားဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားလာတာပါ။ရင်သားစပြီးဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားလာတဲ့အခါရင်သားနားတဝိုက်နဲ့နို့သီးခေါင်းတဝိုက်မှာနူးညံ့မှုကပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ။ကံမကောင်းစွာနဲ့မိန်းကလေးအများစုမှာရင်သားတဖက်စီကတူညီတဲ့နှုန်းနဲ့မကြီးထွားပါဘူး။အရွယ်အစားမတူတာကလည်းပုံမှန်ပါပဲ။အရွယ်ရောက်ချိန်မှာနို့သီးခေါင်းနားတဝိုက်စမည်းလာပြီးပိုကြီး ပါတယ်။အချို့မိန်းကလေးတွေမှာလျင်မြန်တဲ့ကြီးထွားမှုနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါရင်သားတဝိုက်၊တင်ပါးတဝိုက်၊ပေါင်တဝိုက်မှာအကြောပြတ်ရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုသတိထားမိမှာပါ။စိုးရိမ်စရာမရှိပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။ယေဘုယျအားဖြင့်ဒုတိယသတိထားမိတဲ့အချက်ကဆီးခုံမွှေးပေါက်လာတာပါ။အရွယ်ရောက်ချိန်မှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအမွှေးအမျှင်တွေပိုပေါက်လာပြီးဦးခေါင်း၊ချိုင်း၊ဆီးခုံနဲ့မျက်နှာပေါ်မှာပေါက်လာပါတယ်။ချိုင်းမွှေးမပေါက်ခင်မိန်းမကိုယ်အပြင်ဘက်နှုတ်ခမ်းတဝိုက်မှာအများအားဖြင့်အမွှေးအမျှင်ပေါက်ကြပါတယ်။များသောအားဖြင့်ချိုင်းမွှေးဟာအရွယ်ရောက်ချိန်ပြီးဆုံးတဲ့အခါပေါက်လာပါတယ်။အစမှာသင့်ဆီးခုံနေရာနဲ့လက်မောင်းအောက်မှာအမွှေးနုလေးတွေအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးကြာလာတဲ့အခါအမွှေးတွေဟာပိုထူလာပြီးပိုကောက်ကွေးလာပါတယ်။အသက်၇နှစ်နဲ့၁၃နှစ်ကြားမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့သားဥအိမ်ကအီစတိုဂျင်ဟော်မုန်းကိုစတင်ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။အီစတိုဂျင်ထုတ်လွှတ်ရေးတိုးမြှင့်မှုကြောင့်လိင်အင်္ဂါများ(မိန်းမကိုယ်၊သားအိမ်နဲ့သားဥအိမ်အပါအဝင်)အရွယ်အစားကြီးထွားလာပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ရာမှာအကူအညီပေးပါတယ်။အီစတိုဂျင်ထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့သားဥအိမ်တွေကမွေးဖွားချိန်ကနေခန္ဓာကိုယ်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာသားဥပေါင်းများစွာနဲ့ဖြည့်ပေးပါတယ်။သွေးဆုံးချိန်ထိလတိုင်းသားဥအိမ်ကနေသားဥတစ်ဥစီထုတ်လွှတ်ပေးပြီးအဲဒီသားဥဟာသားဥပြွန်ကနေတဆင့်သားအိမ်ဆီရောက်ရှိသွားပါတယ်။သားဥတွေသားဥပြွန်ကနေသွားတဲ့အခါသားအိမ်ကသွေး၊တစ်သျှူးပိုတွေနဲ့ခံပေးထားပြီးကလေးကာကွယ်ဖို့နဲ့အာဟာရဖြစ်စေဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ကိုယ်ဝန်မရှိတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကရာသီစက်ဝန်းဖြစ်စေဖို့ဖယ်ရှားတဲ့အခါ၃ရက်ကနေ၇ရက်ထိကြာပါတယ်။ဓမ္မတာခွင်ဖြစ်နေချိန်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာတင်ပါးကျယ်လာတာတွေ၊ရင်သားနဲ့တင်ပါးနားတွေမှာအဆီပိုများလာတာတွေအပါအဝင်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကောက်အကွေ့တွေစတင်ဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဆက်ပြီးဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားဖို့နဲ့အရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့အဆီပမာဏလိုအပ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ဟာကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဆီတွေကွဲပြားစွာရှိနေတာကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အရွယ်ရောက်ချိန်မှာဖိအားတွေ၊စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေ၊ပြောင်းလဲမှုတွေ၊မဝံ့မရဲရှိုးတိုးရှိုးတန်းဖြစ်တာတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုချင်တပ်မက်မှုတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်။မိန်းကလေးတွေမှာစိတ်အပြောင်းအလဲအတက်အကျပိုဖြစ်လာတာတွေကိုသတိထားမိနိုင်ပါတယ်။ဒါကထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ဟော်မုန်းအားလုံးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးတယောက်မှာအရွယ်ရောက်ချိန်ပြီးဆုံးတဲ့အခါဒီခံစားချက်တွေကလည်းကျော်လွန်သွားပါတယ်။ (https://www.youtube.com/watch?v=exVUM5LABQg
ယောက်ျားလေးတွေက ဘယ်အချိန်မှာ ဆီးခုံမွှေး စပေါက်လာပါသလဲ?
အမျိုးသားတွေမှာ အသက် ၁၀ နှစ်နဲ့ ၁၅ နှစ်ကြား ဆီးခုံမွှေး စပေါက်လာပါတယ်။
ဆီးခုံမွှေး ပေါက်ပြီး ၂ နှစ်လောက်နေရင် မျက်နှာနဲ့ လက်မောင်းအောက် ချိုင်းမွှေးတွေ စပေါက်လာတတ်ပါတယ်။
လူပျိုဖော်ဝင်ချိန်၊ အပျိုဖော်ဝင်ချိန်က လူတိုင်းမတူကြပါဘူး။ အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နှစ်အပိုင်းအခြားက ယေဘူယျဆန်ပြီး ဒီထက်စောတာနောက်ကျတာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ချိန်မှာသင့်စိတ်ခံစားမှုကအလွန်ပြင်းထန်ကြီးမားလာပါတယ်။တမိနစ်အတွင်းမှာလူတယောက်ကကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံးရောက်သွားသလိုခံစားရပြီးနောက်မိနစ်မှာအမှိုက်ပုံထဲကျသွားသလိုခံစားရပါတယ်။ဝမ်းနည်းနေတာကခက်ခဲစေပြီးတယောက်ယောက်ကိုဖွင့်ပြောလိုက်တာကအကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုသင့်မိဘ(သို့မဟုတ်)သင့်ကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေပြီးသင်ယုံကြည်ရတဲ့အခြားလူကြီးသူမကိုပြောဆိုခြင်းကကောင်းမွန်တဲ့အကြံတစ်ခုပါ။လူတယောက်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးနဲ့တိုက်တွန်းမှုတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ(သို့မဟုတ်)စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တွေကိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါတယ်။တချို့ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာတော့လိင်မှုရေးရာကိစ္စတွေမှာထန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါဒီခံစားချက်တွေကမပြင်းထန်တော့ပါဘူး။တချို့ဆယ်ကျော်သက်တွေကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်ကိုလွှတ်ပေးဖို့မိမိဘာသာဆန္ဒဖြေဖျောက်ဖို့ရွေးချယ်ကြပြီးတချို့ကတော့ဒီခံစားချက်တွေကျော်လွန်ပြီးမြောက်သွားဖို့စောင့်ကြတယ်။ယောကျာ်းလေးတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက်သီးသန့်ဆန္ဒဖြေဖျောက်ကြတာကပုံမှန်ပါပဲ။ဆယ်ကျော်သက်တွေအနေနဲ့လိင်မှုရေးရာကိစ္စတွေမှာမပါဝင်ခင်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။အရွယ်ရောက်ချိန်ကအလွန်ရှုပ်ထွေးပါတယ်။စိတ်ခံစားမှုတွေကအထိန်းအချုပ်ကင်းမဲ့သွားပေမဲ့စိတ်အပြောင်းအလဲဖြစ်တာကတော့အရွယ်ရောက်ချိန်ရဲ့ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။လူတိုင်းအရွယ်ရောက်ချိန်ကိုဖြတ်သန်းသွားရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘလိုမျိုးလူကြီးတစ်ယောက်နဲ့တိုင်ပင်ပြောဆိုတာကလူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုဖွင့်ထုတ်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။မိမိထက်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့မောင်နှမသားချင်း၊ဝမ်းကွဲမောင်နှမ၊အဒေါ်၊ဦးလေးတွေ၊အဖိုးအဖွားတွေနဲ့ပြောဆိုတိုင်ပင်ခြင်းကအကူအညီပေးပါတယ်။ဆယ်ကျော်သက်အများစုကအားကစား၊အကအခုန်၊အရေးအသား၊အနုပညာနဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်ထွက်လည်တာတွေပြုလုပ်တာဟာစိတ်ဖိအားကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပြီးစိတ်အပြောင်းအလဲဖြစ်ရင်ထိန်းချုပ်ရာမှာလည်းကူညီပေးပါတယ်။ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်းကလူတယောက်ကိုလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်စေပြီးအနားယူစရာမရှိပါဘူး။ပိုနေတဲ့စွမ်းအင်တွေကိုထုတ်ဖို့ကာယပိုင်းဆိုင်ရာတီထွင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ထွက်ပေါက်ရှာဖွေခြင်းကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ (https://www.plannedparenthood.org/teens/my-body/puberty )
ကျွန်မ ရင်သားတွေသေးနေပါတယ်။ ရင်သား ပိုကြီးလာအောင် လုပ်လို့ရပါသလား?
မျက်စိအရောင် အရပ်အမြင့်လိုမျိုး အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ မျိုးစေ့ဗီဇက သူမရဲ့ ရင်သားကို အဆုံးအဖြတ်ပေးပါတယ်။ သင်ဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာဆိုရင် သင့်ရဲ့ ရင်သားက ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပေမဲ့ နောက်ဆုံးရင်သားအရွယ်အစားကို ရောက်ရှိလာနိူင်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှု ရပ်တန့်သွားတဲ့ အချိန်ထိ မသိနိုင်ပါဘူး။ မိန်းကလေးအများစုမှာတော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှ အသက်၂ဝ ထိဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်ကုန်အများစုက ရင်သားအရွယ်အစားတိုးမြှင့်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ ပြောကြပေမဲ့ ပိုက်ဆံချွေတာစုဆောင်းပါ။ အဲဒါတွေက အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ အချို့မိန်းကလေးတွေမှာ ဘရာဝတ်ထားတဲ့အခါ ပိုမိုပျော်ရွှင်တဲ့ အသွင်အပြင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ အချို့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အရ အပေါ်အင်္ကျီနဲ့ တချိူ့ ဂါဝန်တွေက တခြားအဝတ်အစားဟာတွေထက်စာရင် ပိုပြားတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။
သင်ဟာ သင့်ရင်သားအရွယ်အစား(သို့) သင့်ရင်သားဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်နေရင် ဆရာဝန်(သို့) သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြောဆိုပါ။ လူတိုင်းဟာ သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကြိုက်တဲ့အချိန်ကိုဖြတ်သန်းကြရပြီး ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပုံမှန် အစိတ်အပိုင်းပါပဲ။ ရင်သားကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေတောင် သူတို့ရင်သားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေရပြီး သူတို့ရင်သားကို ပိုသေးအောင်လုပ်ချင်ကြတယ်။ တချို့တွေကျတော့ နောက်ကျောနဲ့ ပခုံးမှာ နာကျင်ပြီး ရင်သားကြီးတာက မလိုလားအပ်တဲ့ ဆွဲဆောင်မှုမျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားရမှာက ရင်သားကြီးတာက ကြီးမားတဲ့ အလှတရားမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့ ရင်သားက ထူးခြားပါတယ်။
ရင်သားအရွယ်အစားကို ထာဝရပြောင်းလဲစေတဲ့ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းက အလှအပဆိုင်ရာခွဲစိတ်ပြုပြင်တာဖြစ်ပြီး ငွေကုန်ကြေးကျများပါတယ်။ ရင်သားဆက်လက် ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ အမျိူးသမီးတွေအတွက်တော့ ဒီနည်းကို အကြံပြုထောက်ခံထားခြင်းမရှိပါ။